Shaqaale Shabelle & SKY oo la sii daayey iyo sadex xiran – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shaqaale Shabelle & SKY oo la sii daayey iyo sadex xiran
Mareeg.com: Dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga kasii daysay 16 ka mid ah shaqaalihii idaacadaha Shabelle iyo SKY FM oo ciidanka nabad-sugidda dowladda ay xabsiga u taxaabeen Jimcihii lasoo dhaafay, iyadoo ay weli xabsiga ku jiraan saddex ka mid ah shaqaalaha idaacadahaas.
Ku xigeenka madaxa barnaamijyada ee idaacadda Shabelle, Xasanweli Sheekh Abuubakar ayaa sheegay in la sii daayay 16-kaasi qof.
Xasan ayaa intaa ku daray in weli ay xiran yihiin guddoomiyaha idaacadda Shabelle, Cabdimaalik Yuusuf Maxamuud, Agaasimaha idaacadda SKY FM, Maxamuud Maxamed Daahir (Maxamuud Carab) iyo ku xigeenka madaxa wararka idaacadda Shabelle, Axmed Cabdi Xasan.
Xasan Weli ayaa tilmaamay in mas’uuliyiin ka tirsan nabad sugidda qaranku ay dadka la sii daayey ku amreen in aanay war siin Karin warbaahinta.
Saddexda xabsiga ku jira eek ala ah madaxa Radio Shabelle, Cabdimaalik Yuusuf Maxamuud, Agaasimihii idaacadda SKY FM, Maxamuud Maxamed Daahir (Carab) iyo ku xigeenkii madaxa wararka ee idaacadda Shabelle, Axmed Cabdi Xasan ayaa dowladdu ay sheegtay in maxkamad lasoo taagayo.
Ururka saxafiyiinta NUSOJ ayaa soo dhaweeyey sii deynta shaqaalaha Radio Shabeelle iyo SKY “Waxaanu soo dhaweynaynaa sii daynta 16-ka shaqaale ee ka tirsan idaacadaha Shabelle iyo SKY FM oo Jimcihii xabsiga la dhigay, kaddib markii ay ciidamada dowladdu weerareen xarunta idaacadahaas ay ku howlgalayeen,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ay NUSOJ soo saartay.
Ururka Qaranka Suxuufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa dowladda ugu baaqay inay xukunka saddexda xubnood ee weli ku jira gacanta ciidamada dowladda in xukunkoodu uu noqdo mid cadaalad ku saleysan.
“Waxaan dowladda ugu baaqaynaa inay sii dayso saaxiibbadeenna ku jira xabsiga,” ayuu yiri xoghayaha guud ee NUSOJ, Maxamed Ibraahim Bakistaan oo intaas ku daray. “Waxaanu ku dadaalaynaa sidii ay jaalkeenna xiran u heli lahaayeen xukun cadaalad ku saleysan.”
NUSOJ ayaa xustay in shaqaalaha xabsiga laga sii daayay ay isugu jireen wariyeyaal, faarsamo-yaqaanno iyo waardiyeyaal ka tirsan labadan idaacadood, iyadoo labadii idaacadood ay weli xiran yihiin.
Xeer Ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa dhawaan sheegay in maamulka labadaas Idaacadood maxkamada lasoo tagayo, isagoo weliba xusay iney jiraan qaar baxsaday oo la raadinayo.
Halkaan ka dhegeyso codka Dr. Axmed Daahir
Hub ka dhigista oo ku wajahan Baay & Bakool
Dhageyso: Weerarkii lagu qaaday guriga Axmed Daaci oo la baarayo